प्रकासित मिति : २०७६, २८ चैत्र शुक्रबार २२:०३ प्रकासित समय : २२:०३
ओखलढुङ्गान्युज, चैत २८, ओखलढुङ्गा । कोभिड १९ (कोरोना) भाईरसको कारण विश्व समुदाय आतंकित छ । कोरोना विश्वभरि महामारीको रुपमा फैलँदो छ । यो महामारीबाट नेपाल पनि अछुतो रहेन । सरकारले कोरोना भाईरस संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामको लकडाउन गरि पहल गरिरहेको छ । देशभरिका स्थानीय तहहरुले आफ्नो अनुकुलतामा क्वारेन्टाईन निर्माण गरेका छन् । कतिपयले आईसोलेसन कक्ष निर्माण गरि शंकास्पद बिरामीहरुलाई उपचार गराई रहेका छन् । कोभिड १९ (कोरोना) भाईरस संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि ओखलढुङ्गामा के कस्तो काम भइरहेको छ ? ओखलढुङ्गा जिल्लाबाट निर्वाचित संघीय प्रतिनिधीसभा सदस्य यज्ञराज सुनुवारसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ सांसद यज्ञराज सुनुवारसँग ओखलढुङ्गान्युज डटकमले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
विश्व व्यापी रुपमा आतंक फैलिरहेको कोरोना भाईरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि ओखलढुंगामा तपाईँले के पहल गरिरहनु भएको छ ?
कोरोना भाईरसको संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि नेपालमा लकडाउन हुनु अघि न मैले संघीय तहमा कुरा उठाएको थिएँ । खुला सीमालाई तत्काल नियमन गर्नुपछ, त्यसका लागि सरकारले दुवै छिमेकी मूलुकहरु भारत र चीनसँग वार्ता गर्नुपर्छ, कुटनीतिक पहल गरेर भाईरसको नियन्त्रणमा ख्याल पु¥याउनु पर्छ भनेको थिएँ । केही समय खुला सीमालाई लक गर्नुपर्छ भनेर संसदमा बोलेँ । जिल्लाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा लकडाउन पछि जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरेर सुझावहरु दिएँ । त्यो सुझाव कार्यान्वयन भईरहेको छ । जिल्लामा प्रबेश गर्नेहरुको तथ्यांकसँगै सम्बन्धित गाउँपालिकामा विदेशवाट आएका वा नयाँ मान्छेहरुको तथ्यांक व्यवस्थित गरेर राख्न र २४ सै घण्टा कुन् नाकाबाट कस्ता मान्छेहरु जिल्ला प्रबेश गरेका छन् भनेर प्रहरी र स्थानीय तहलाई अपडेट गर्न सुझाव दिएको छु ।
लकडाउनको शुरुमा जिल्लामा स्वास्थ्य सामाग्रीको अभाव कहाली लाग्दो थियो । त्यसलाई कम गर्न मेरो पहलमा जिल्लामा स्वास्थ्य सामाग्री सेटहरुको उपलब्ध गराएको छु । तत्कालका केही समस्याको समाधानको लागि ध्यान दिँदै ओखलढुङ्गामा कोरोना भाईरसको संक्रमण हुन नदिन यथासम्भव प्रयास भएका छन् । लकडाउका कारण विभिन्न स्थानहरुमा रोकिएर, अलपत्र परेका जिल्लाबासीहरुलाई स्वास्थ्य परीक्षण गरि जिल्ला भित्र्याउने र अलपत्र परेकाहरुलाई सम्बन्धित स्थानमा पु¥याउने काम भईरहेको छ । स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत आएको सुझाव, गुनासालाई सरकार सम्म पु¥याउने काम गरिरहेको छु ।
जिल्लाका केही स्थानीय तहले निर्माण गरेको क्वारेन्टाईनको अनुगमन गर्नुभएको छ, कस्तो पाउनुभयो ?
कोरोना भाईरस संक्रमणको लक्षण नेपालमा देखिनासाथ मैले जिल्लाको सबै गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सम्भव भएसम्मका वडा अध्यक्षहरुसँग हरेक वडाको वस्तुस्थितिको बारेमा जानकारी लिईरहेको छु । स्थानीय तहहरुले आफ्नो स्थानीय श्रोत साधनले भ्याएसम्म सृजनशीलता प्रयोग गरेर काम गरिरहेका छन् । जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा क्वारेन्टाईन कक्ष तथा कतिपय स्थानीय तहमा आईसोलेसन कक्षको निर्माण भएका छन्ं । जिल्ला अस्पताल रुम्जाटार र सामुदायिक अस्पताल सोब्रुले आईसोलेसन सँगै क्वारेन्टाईन बेड निर्माण गरेको छ । मैले त्यसको अनुगमन गरँे । श्रोत साधनको हिसाबले कतिपय स्थानीय तहमा क्वारेन्टाईनहरु अत्यन्तै उत्कष्ृट बनेका छन् । कतिपय स्थानमा हतारहतारमा निर्माण भएको कारणले क्वारेन्टाईनमा हुनुपर्ने मापदण्डको अभाव देखिन्छ । त्यसलाई ब्यबस्थित गर्ने र मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टाईन निर्माण गर्न सुझाब दिएको छु ।
फिल्डमा जाँदा कतिपय स्वास्थ्य कर्मचारीहरु डराएर सेवा दिईरहेको देखेँ । सुरक्षा सामाग्रीहरुको अभावका विचमा कसरी उपचार गर्ने भनेर मानिसहरु अन्यौलग्रस्त छन् । स्वास्थ्यकर्मीहरुमा पनि अन्यौलता देखेँ । यसलाई हल गर्न जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको नेतृत्वमा जिल्लामा रहेका सबै पालिकाका स्वास्थ्य चौकी प्रमुखहरुलाई बोलाएर स्वास्थ्य सामाग्रीहरुको ठिक ढंगले प्रयोग र फिल्डमा आत्मविश्वासका साथ उपचारमा सरिक हुने वातावरण निर्माण गर्न निर्देशन दिएको छु । ठुलठुला अस्पतालमा सामान्य ज्वरो आउँदा उपचार नहुने अबस्था छ । तर ओखलढुङ्गामा जुन योग्यताको स्वास्थ्यकर्मीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई ढाडस दिने गरि अभिमुखिकरण सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ ।
यो विषम परिस्थितिमा कालोबजारी भैरहेको छ भन्ने नागरिकहरुको गुनासो छ नि ?
यस्तो समयमा नागरिकलाई दिईने सेवा सुबिधा तथा सामाग्रीमा कहिकतै कालोबजारी हुनुहुन्न । अभाव खडा गर्ने, बस्तुहरुमा कालाबजारी गर्ने वा महंगी बढाउने काम कसैले गर्छ भने त्यो मानवता विरोधी काम हो । त्यस्तालाई तत्काल कार्वाही गर्नुपर्छ र हुन्छ । तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ, लुकाएर राखेको ठाउँवाट सरकारले लाखौँलाख संख्यामा मास्क जफत गरेको छ । यस्ता कुरामा सरकारले निगरानी बढाउनु पर्दछ । कारबाही प्रकृया अघि बढाउनु पर्दछ, हामीले सरकारलाई भनेका छौं ।
कतिपय स्थानीय तहहरुले कोरोना संक्रमणबाट बच्नका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरुले प्रयोग गर्ने स्वास्थ्य सामाग्रीहरु पाएनौ भनि रहेका छन् नि ?
पीपीई (पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्यूपमेन्ट) भनेको अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले संक्रमितहरुको उपचार गर्नका लागि प्रयोग गर्ने अत्यावश्यकिय सामाग्री रहेछ । तर हाम्रा स्वास्थ्य चौकीहरुका कर्मचारीले समेत पीपीई आएन भनेर सामान्य खालका बिरामीका स्वास्थ्य परीक्षण गर्न डराउने परिस्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ । त्यसका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरुमा आत्मविश्वासको खाँचो देखेको छु । फ्रन्ट लाईनमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरु र सुरक्षाकर्मीहरुको लागि चाहिने स्वास्थ्य सामाग्री जिल्लामा पहिलो लटमा मैले पठाई सकेको छु । तर लकडाउन पश्चात त्यस्ता सामाग्री विदेशवाट समेत सजिलै खरिद गरेर ल्याउन सकिएको छैन । सरकारले विदेशवाट खरिद गरेर ल्याएको सामाग्रीमा केही समस्या देखिएका कारण समस्या झेल्नु परेको छ । आशा गरौं यो समस्या चाडैं हल हुनेछ ।
दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने मजदुरहरु लकडाउनका कारण समस्यामा छन् । उनीहरुको लागि के गर्नुभएको छ ?
मजदुर दुई प्रकारको देखिएको छ । एक शहरमा बस्ने, जो गाउँवाट पेशा व्यबसाय गर्नका लागि शहरहरुमा गएको । जसले श्रम गरेवापत ज्याला नपाएका वा होटल पसल वा अन्य व्यबसाय सञ्चालन गरेको तर अहिले सञ्चालन गर्न नसकेको । दोश्रो मजदुर भनेको जिल्लामा रहेको, जिल्लाका विभिन्न आयोजनाहरुमा काम गर्ने, मेलापात, आफ्नै खेतिपाती गरेर जिविकोपार्जन गर्ने श्रमिकहरुको समस्या छ । सँगै गाउँमा भईकन आफ्नै खेतवारी नभएकाहरुको समस्या छ । श्रमगर्ने ठाउँ नभएका श्रमिकहरुको लिष्ट तयारी गरेर राहत दिने तयारी भईरहेको छ ।
नागरिकको जीवन रहनु पहिलो कुरा भएकोले खाद्यान्न अभावले छटपटाएका मजदुरहरुका लागि सरकारले साद्यान्न वितरणको काम सुरुवात गरेको छ । त्यस्ता श्रमिकहरु विशेषतः शहरमा रहेकोले यस्ता राहत वितरणको काम शहरवाट शुरु भएको छ । राहत कार्यक्रम सञ्चालनका लागि केन्द्र सरकारको निर्णय अनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले आवश्यक योगदान गरिरहेका छन् । जो नागरिक जहाँ छ, त्यस वडामा रहेका बास्तविक मजदुरहरुको विवरण संकलन गरि उनीहरुलाई आवश्यक खाद्यान्नको उपलब्धता गराउन स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले निर्देशन दिईसकेको छ ।
कोरोना भाईरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरुले प्रयोग गर्ने आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री चीनवाट खरिद गर्ने क्रममा विवादित भयो । यसमा तपाईँको धारणा के छ ?
चीनबाट खरिद गरिएको सामानको विषयमा बजारमा जुन हल्ला छ । सरकारको तर्फवाट भनि सकिएको छ, ‘नागरिकको जीवनलाई सरकारले पैसासँग तुलना नगरेका कारण सामाग्रीहरु ल्याउँदा केही महंगो भयो होला । हामीले ल्याउने तयारी गरेर ल्याउने जिम्मेवारी पनि दियौँ, तर जसलाई सामाग्री ल्याउने जिम्मेवारी दियौं, उसले एक गुणस्तरिय सामान प्रदान गर्न सकेन । दोश्रो त्यो सामाग्री आवश्यक संख्यामा समयमा ल्याउन नसकेका कारण सम्झौता रद्ध गरेको छौं’ भनेर सरकारी अधिकारीहरुले भनिसकेका छन् ।
त्यस काममा भएको कमीकमजोरीमा दोषीले कुनै बहानामा उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । यहि बहानामा विचौलियाहरुले खेल्न सक्दछन् । कृत्रिम अभाव र अनेकौ कुराहरु हुनसक्छन् । महंगी कालोबजारी हुनसक्छ । सरकारलाई असफल बनाउने खेल हुन सक्दछ । त्यसतर्फ सरकाले ध्यान दिनुपर्दछ ।
कोरोनाका कारण जिल्लामा सञ्चालित विकासका योजनाहरु रोकिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि समेत यसले असर गर्ने अवस्था छ । विकास निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिन के गर्न सकिएला ?
आगामी आर्थिक वर्षको कुरामात्रै हैन चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा रहेका र सञ्चालन हुने क्रममा रहेका कतिपय योजनाहरु बन्द अवस्थामा छन् । यस्तो बेलामा नागरिक तथा सिंगो समाजको मनोविज्ञान विकास पछि गरौँला, तर अहिले बाँच्न पाउँ भन्ने अवस्थामा छ । ओखलढुङ्गामा अप्टिकल फाईबर विच्छ्याउने देखी लिखु एकवार सडक, लिखु हाईड्रोपावरको काम, मोलुङ एकवार सडक, ओखलढुङ्गा रामपुर सडकको कालोपत्रे जस्ता दर्जनौं काम रोकिएका छन् । लकडाउन थपिएको छ । यो ठूलो महामारीमा मूलुक अहिले संघर्षरत छ । महामारीवाट नागरिकलाई जोगाउन सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ । आशा गरौं, छिट्टै यो त्रासपूर्ण वातावरणको अन्त्यसँगै विकासको कामहरु अघि बढ्नेछन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, योजना, नीति तथा कार्यक्रमको कुरा छ, यस आर्थिक वर्षको हिउँदे अधिबेशन अन्त्य भएको छैन । क्रमशः सरिरहेको छ । यो हिउँदे अधिबेशन कसरी अन्त्य गर्ने ? २५ जना भन्दा बढि एकै ठाउँमा भेला हुनुहुदैन । यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारले द्रुतमार्गको प्रयोग गरि समाधान खोज्दै अघि बढ्नुपर्ने परिस्थिति देख्छु ।
तिनै तहका सरकारका बीच आवश्यक समन्वय हुन सकेन भन्ने कुरा कत्तिको साँचो हो ?
एउटै जिल्लाका स्थानीय तहले आ–आफ्नै तरिकाले काम गर्दा एक स्थानीय तहको असर अर्कोलाई परेको देखेको छु । त्यसले समरुपता ल्याउँदैन । त्यसैले यतिवेला बढी लोकतान्त्रिक भएर संरचनाहरु निर्माण गर्दा बहुरुपता ल्याएको छ । यो संक्रमण रोक्नका लागि नागरिकहरुको आवश्यकता र अपेक्षा एकातिर छ । तहगत संरचनाले स्थानीय तहलाई अर्कोतिर समस्यामा पारको छ । त्यसैले यो कुरालाई समन्वय गर्दै कम्तीमा ओखलढुङ्गाको आठओटै स्थानीय तहहरुले एकआपसमा समन्वय गरेर सकारात्मक कामको सिको गर्दै अनुभव आदान प्रदान गरेमा त्यसले एकआपस बीचको अन्तरसम्बन्धलाई सुदृढ गराउँछ ।
अन्त्यमा पाठकहरुलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ की ?
ओखलढुङ्गामा कोरोना भाईरस संक्रमणको नियन्त्रण र रोकथामका लागि नागरिक स्तरमा सचेतना र सावधानी अपनाईएको छ । यो अत्यन्तै सह्राहनीय छ । कुनै स्थानीय तहमा नयाँ मान्छेको आगमन भयो भने तुरुन्त नागरिकहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ती नयाँ मान्छेको बारेमा जानकारी गराई ती मान्छेको चेकजाँच गर्नुप¥यो भनेर टोल छिमेकले काम गरेको पाएँ । त्यो सकारात्मक पाटो हो ।
विदेशमा रहेका केही नेपालीहरुले ज्यान गुमाउनु परेको छ । अन्तराष्ट्रिय घटनावाट नेपालीले पाठ सिकेका छन् । कम्तीमा नेपालमै नेपालीले ज्यान गुमाउनु परेको छैन । यो नेपालीको सचेतनाको उपलब्धी हो । विषम परिस्थितिमा राज्यको आव्हानलाई यो मेरो लागि हो, भनेर घरमै बसेर लकडाउनलाई साथ दिईरहनु भएको छ । उहाँहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
नागरिकहरुको जिवन रक्षाका लागि अग्रदस्तामा रहेर कोरोना भाईरसको संक्रमण हुन नदिन खटिरहनुभएका स्वास्थ्यकर्मीहरु, सुरक्षाकर्मी प्रति आभारी छौँ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरु ज–जसले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि योगदान दिनुभएको छ, जिल्लाको जिम्मेवार जनप्रतिनिधी हुनुको नाताले सबैलाई धन्यवाद ब्यक्त गर्दछु । सञ्चारकर्मीहरुलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु । विश्वमा जुन प्रकारको कहाली लाग्दो परिस्थिति देखा परिरहेको छ, यसबाट नेपालीहरुलाई, जिल्लाबासीहरुलाई एवम् सम्पूर्ण मानवजातिलाई जोगाउन सञ्चारजगतले खेलेको रचनात्मक, सृजनात्मक भूमिका प्रशंसनीय छ ।